Yini Ethonya Isinqumo Sokuthenga?
ULwesibili, April 23, 2013 Douglas Karr
Isayensi ngemuva lapho abantu benza isinqumo sokuthenga iyamangalisa impela. IBigCommerce iyiSoftware ethandwa kakhulu njenge-Service (SaaS) ecommerce nesikhulumi senqola yokuthenga. IBigCommerce ikunikeza inqwaba yamathuluzi we-e-commerce abanjwe ngokuphepha, kufaka phakathi iwebhusayithi, igama lesizinda, inqola yokuthenga ephephile, ikhathalogi yomkhiqizo, isango lokukhokha, i-CRM, ama-akhawunti we-imeyili, amathuluzi wokumaketha, ukubika kanye nesitolo esenziwe ngomakhalekhukhwini. Muva nje benze i-infographic enikeza imininingwane kulokho okuthonya isinqumo sokuthenga. Simboza okuphezulu okungu-10